Imicikilisho yamaVeda Yezikhathi Ezingcono Zokusa - Ezempilo
Imicikilisho yamaVeda Yezikhathi Ezingcono Zokusa
Vedic Rituals Better Mornings
Uhlelo lwe-Indic-Vedic luyifa eliyizinkulungwane zeminyaka locwaningo olunzulu oluxhumene nenethiwekhi yesayensi ephelele esinika amandla okuqonda umzimba wethu. Izazi zaseNdiya zaziqonda amandla acashile asibophezelayo, ukudla okuthinte imikhuba yethu yokuziphatha nemijikelezo yesimo sezulu ethinte imizwa nemizwelo yethu. Babone ukuxhumana okuyingqayizivele phakathi kwe- 'IPrakriti' kanye nomthethosisekelo womzimba wesifazane, ngaleyo ndlela kwakheka izindlela nemicikilisho yempilo enhle, ubuhle obukhazimulayo nempilo enokuthula - lokhu dinacharya . Ngakho-ke, yini inqubo efanelekayo yasekuseni, ngokusho kwe- Ama-Vedas ?
• Vuka ngaphambi kokuphuma kwelanga, phakathi kuka-4 no-6 ekuseni. Sebenzisa lesi sikhathi ukwelula nokuphumula. Kukholakala ukuthi i- vata i-elementi iyabusa ngalezi zikhathi, ekuvumela ukuthi ukwazi ukungena kumaza omzimba nengqondo yakho.
• Uma usuvukile, phefumula kancane. Ungavuli amehlo akho okwamanje.
Hlala unganyakazi, uqondise umgogodla, welule, futhi ujikeleze intamo yakho kamnandi.
• Hlikihla izintende kancane uvule amehlo akho kuzo. Uzobona umphumela wokudambisa osheshayo.
• Phuza izingilazi ezimbili zamanzi ekuseni kakhulu, okungcono kusuka esitsheni sethusi. Le nqubo izosiza ukukhipha ubuthi emzimbeni, iqinise ikholoni futhi isebenze isinye, esinganciphisa izimo ezingalapheki zohlelo lokugaya ukudla. Khumbula ukugcwalisa umkhumbi wethusi ngamanzi okushisa ekamelweni bese uwubeka eceleni kombhede wakho njalo ebusuku ngaphambi kokuba ulale.
• Vuvula umlomo ngamanzi, xubha amazinyo bese uhlanza ulimi ukuze usebenzise ama-buds okunambitha. Ngokusho kwemibhalo, umuntu kufanele ahlanze amazinyo abo ngezinti ze-neem, dantmanjan noma yikuphi ukunamathisela kwamakhambi.
• Splash amanzi abandayo ebusweni bakho ukuze uqinise imisipha yakho ebusweni ngokushesha futhi ikuvuse. Futha amanzi ama-rose emehlweni akho ukuze ugcine amehlo ahlanzekile, abukhali futhi enempilo.
• Zijwayeze gandhusha noma uhlanza umlomo wakho ngesipuni sikakhukhunathi noma uwoyela wesame. Iqinisa amazinyo nezinsini, imasaje umphimbo, izintambo zezwi kanye namalaka futhi iqeda noma yiluphi uhlobo lokutheleleka komphimbo.
• Isosha noma i-gargling iyalandela. Izokhipha izinsini, yenze udonga lomlomo nezihlathi luqine futhi isize nokususa noma yikuphi ukudla okusele phakathi kwamazinyo. Ukungasho, kuzokhanyisa ukumamatheka kwakho kancane.
• Khipha amathumbu akho. I-Ayurveda ithi kubalulekile ukuhlola indle yakho nsuku zonke ukuthola umbiko ozibonelayo wokuthi uhlelo lwakho lwangaphakathi lusebenza kanjani. Uma indle yakho intanta, uma ingenamandla, iyashesha futhi ayinamatheli, khona-ke uphezu kwempilo yakho.
• Zijwayeze i-yoga futhi pranayama . Phakathi kuka-6 kuya ku-10 ekuseni, umzimba usesigabeni sawo esiqine ngokomzimba. Ukuzijwayeza i-yoga kususa ubuvila, kubasa umlilo wokugaya ukudla, kushe amanoni futhi kuthuthukise umuzwa wokuthula nenjabulo. Uma ukhululekile ukuzijwayeza ukubingelelwa yilanga, qhubeka bese uphinda imijikelezo eyi-12.
• Emva kwalokhu, hlala ekhoneni elithulile uqiniseke ukuthi amawindi avuliwe, uvumele umoya omusha nokukhanya kugcwalise isikhala sakho. Vala amehlo akho bese umane ugcine umoya wakho ngenkathi ulokhu ucula I-Aum. Uma wazi okulula pranayama amasu afana anulom-vilom noma ujjayi, zijwayeze imizuliswano embalwa. Thinta isisu sakho ukubona ukuhamba komoya wakho.
• Abhyanga noma ukubhucungwa. Lo mkhuba wandisa ukuqina komzimba nobungqabavu buyayekelela imisipha futhi kwenza amalunga akho aqine. Dab amanye kakhukhunathi afudumele noma uwoyela we-sesame ofakwe nge-rose uma unayo vata dosha , khus uma unayo pitta dosha futhi imure uma unayo kapha dosha . Massage lokhu emzimbeni wakho wonke. Linda imizuzu eyi-15 ukuze uwoyela ungene. Geza ngamanzi afudumele.
Noma le ndlela ingahle ibonakale ithatha isikhathi, inzima futhi incane, inamandla okuguqula impilo yakho kancane kepha ngokuqinisekile. Zikunikeza amandla okulawula imizwa yakho, zisebenzise amandla akho ngendlela eyakhayo futhi uhlale kude nokunganaki. Le micikilisho inamandla okwakha impilo enempilo enhle ezokhipha ubuthi, ihlanze futhi yondle ingqondo nomzimba.
Funda futhi: Isiko Lomlomo le-Ayurvedic: Yisikhathi Sokuqala Ukuzijwayeza Ukudonsa Amafutha
amathiphu wobuhle bokukhanya kobuso ekhaya okwenziwe
amakhambi asekhaya imibimbi ngaphansi kwamehlo
zonke izinhlobo ze-yoga asanas
ama-crunches okunciphisa amafutha esiswini
amakhambi asebenzayo ekhaya wokuwa kwezinwele
amathiphu okukhula kwezinwele ekhaya